ट्रकको ठक्करबाट एसइई परीक्षा दिने परीक्षार्थीको मृत्यु- देश - कान्तिपुर समाचार
ट्रकको ठक्करबाट एसइई परीक्षा दिने परीक्षार्थीको मृत्यु
चैत्र ७, २०७३
राजविराज — पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको रुपनगरमा ट्रकको ठक्करबाट एसइई परीक्षा दिने एक परीक्षार्थीको आज बिहान मृत्यु भएको छ ।
पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना१क ५२०० नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा सप्तरी भारदह–२ कि १६ वर्षीया नितुकुमारी ठाकुरको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ ।
ठाकुर रुपनगरस्थित शङ्कर उच्च माविमा परीक्षा दिन भारदहको बिपी मावि परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिन जाँदै गर्दा बाटो काट्ने क्रममा ट्रकले ठक्कर दिएको थियो ।
ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायणसिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ट्रक चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । रासस
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ १०:१५
यी हुन् मोदीले योगीलाई रोज्नु ८ कारण
चैत्र ७, २०७३ कमलदेव भट्टराई
नयाँ दिल्ली — उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा योगी आदित्यनाथको नियुक्तिसँगै उनको छवि र केही विवादास्पद पृष्ठभूमिका बारेमा समेत बहस सुरु भएको छ । वास्तवमा विगत २० वर्षमा भाजपा र योगीबीचको सम्बन्ध निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो ।
उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा योगी आदित्यनाथको नियुक्तिसँगै उनको छवि र केही विवादास्पद पृष्ठभूमिका बारेमा समेत बहस सुरु भएको छ । वास्तवमा विगत २० वर्षमाभाजपा र योगीबीचको सम्बन्ध निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो ।
निकै तनावका बीचमा पनि भाजपा र उनीबीच सम्वन्धविच्छेद भएन । कारण थियो– कहिले भाजपालाई आदित्यनाथ नभई नहुने त कहिले आदित्यनाथलाई भाजपाको साथ चाहिने । पार्टीमा कुरा नमिल्दा उनले आफूलाई ‘लो प्रोफाइल’ मा राखे तर आफ्नो शक्तिलाई बढाइराखे ।
उनको चर्काे हिन्दु नाराले कतिपय समयमा भाजपालाई हानि समेत गर्‍यो तर त्योभन्दा बढी फाइदा नै भयो । भारतमा भन्ने गरिन्छ, गोरखपुरमा चुनाव जित्न योगीलाई भाजपा चाहिँदैन तर भाजपालाई उनी चाहिन्छ । गोरखपुरमा उनलाई समर्थकहरूले हिन्दु हृदय सम्राट भनी जयजयकार गर्ने गर्दछन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई मुख्यमन्त्री चयन गरे, जसलाई भाजपाका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीले समर्थन गरे । गृहमन्त्री तथा भाजपाका अर्का उत्तर प्रदेशकै ठूला नेता राजनाथ सिंह ओबीसी समूहबाट मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा थिए । तर मोदी र आडवाणीको समर्थन भएपछि पार्टीले निर्णय लियो ।
उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा सिंहको नाम नै चर्चामा थियो तर उनले त्यो स्वीकार गरेनन् । सिंहले मोदीपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका कारण पनि उनी मुख्यमन्त्रीका लागि तयार भएनन् । हुन पनि बीजेपीलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार छान्ने कार्य आफैंमा जटिल थियो । त्यसैले उसले निर्वाचनअघि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार नै घोषणा गरेको थिएन । मोदीले योगीलाई छनोट गर्नुका ८ कारण यी छन् :
१. तीन वर्षअघिको जितमा भूमिका
सन् २०१४ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा योगीले भाजपाको जितका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । जसले गर्दा मोदी उनको कामबाट निकै प्रभावित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा बीजेपीले लोकसभाको ८० सिटमध्ये ७३ सिट जितेको थियो । त्यति बेला पार्टीले उनलाई हेलिकप्टर नै दिएर निर्वाचन अभियानमा सहभागी गराएको थियो । भाजपालाई उत्तरप्रदेशमा मुस्लिम समुदायको भोट कम आउने र उनको कट्टरहिन्दु छविका कारण मुस्लिम समुदायलाई विश्वासमा लिन उनलाई मुस्लिमको बढी बसोबास भएका क्षेत्रमा खटाइएको थियो ।
२. चुनावी अभियानका स्टार
हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा योगी चुनावीअभियानका स्टार नै थिए । उनले भाजपालाई जिताउन उत्तरप्रदेशभरि नै आक्रामक चुनावी अभियान सञ्चालन गरेका थिए । जसले गर्दा विधानसभामा ४०३ सिटमध्ये बीजेपी गठबन्धनले ३२५ सिट जित्यो ।
३. मोदीको अभियानलाई बढाउन सक्ने व्यक्ति
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबैको साथ, सबैको विकास’ नामक राष्ट्रिय अभियानलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्ने मुख्यमन्त्रीको रूपमा उनलाई लिइएको छ । उनले हिन्दुत्व र विकासको नारालाई सँगै अगाडि बढाउन सक्ने बीजेपीको विश्लेषण छ ।
४. विजयलाई निरन्तरता दिने उपयुक्त पात्र
सन् २०१९ मा हुने लोकसभा निर्वाचनमा पनि आफ्नो विजयलाई निरन्तरता दिन बीजेपी चाहन्छ । त्यसका लागि मोदीले देखेको उपयुक्त पात्र उनी नै हुन् । यसका लागि जातीय सन्तुलन आवश्यक पर्छ । त्यसैगरी उपमुख्यमन्त्रीहरू केशवप्रसाद मौर्य र दिनेश शर्माले ओबीसी समुदाय र ब्राह्मण समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछन् ।
५. विहारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति
योगीले गोरखनाथ मन्दिरको ट्रस्टमा काम गरे । विशेषगरी उत्तर प्रदेश र विहारमा यसका धेरै फलोअर छन् । विहारमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाले हार खानुपर्‍यो । त्यसैले मोदीले त्यहाँको राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्न उनलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गरिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
६. दलित र सीमान्तकृत समुदायमा बलियो पकड
कट्टर हिन्दु नेताको छवि बनाए पनि उनको दलित तथा सीमातन्कृत समुदायमा बलियो पकड छ । हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा दलित र पिछडिएको वर्गले बीजेपीलाई राम्रो भोट दिएका थिए जसलाई बीजेपी आगामी लोकसभा निर्वाचनमा समेत निरन्तरता दिन चाहन्छ । यति मात्र होइन, यही भोटलाई लक्षित गरेर उसले ओबीसी समुदायबाट मुख्यमन्त्री छनोट गर्ने गृहकार्य समेत गरेको थियो । योगीले निर्वाचनको समयमा सीमातन्कृत समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने विषयमा आफ्ना योजनासमेत प्रस्तुत गरेका थिए । यति मात्र होइन, मुस्लिम समुदायलाई समेत उनले खुसी राख्ने विश्वास गरिएको छ ।
७. राममन्दिर बनाउने एजेन्डा
अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने भाजपा र उनको मुख्यएजेन्डा छ, जुन चुनावी अभियानमा पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा थियो । विशेषत: योगीले स्थापना गरेको हिन्दु युवा वाहिनीले उनलाई त्यस क्षेत्रमा स्थापित गरायो र उनलाई बीजेपीले समेत बेवास्ता गर्न सकेन । आगामी दिनमा यसले पार्टी झन सुदृढ हुने बीजेपीको विश्लेषण छ ।
८. आरएसएसको दबाब
योगीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा सिफारिस गर्न बीजेपीको भ्रातृ संस्था राष्ट्रिय स्यवंसेवक संघ (आरएसएस) ले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा अन्य नेताहरूलाई निकै नै दबाब दिएको थियो । तर उनको पृष्ठभूमि भने विवादास्पद छ । उनलाई सन् २००७ मा गोरखपुरमा दंगा फैलाएको आरोप समेत लाग्यो । उनलाई त्यतिबेला साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको थियो । अहिले पनि उनको त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
योगी आदित्यनाथले लगातार साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति भने दिइरहेका छन् । केही समयअघि उनले यदि एउटा हिन्दु केटीलाई मुस्लिममा परिणत गरियो भने आफूहरूले १०० मुस्लिमलाई हिन्दुमा परिणत गर्ने चुनौती दिएका थिए । उनी सन् २००७ मा संसद्मा राजनीतिक षड्यन्त्रका कारण आफूलाई गिरफतार गरिएको भन्दै रोएका थिए । उनले निरन्तर रूपमा पार्टीको तर्फबाट नै चुनाव लडे पनि जहिले पनि पार्टीबाट आफूलाई दूरीमा नै राख्ने गर्दथे । उनी लखनउ र दिल्लीमा हुने पार्टीका कार्यक्रमहरूमा खासै सहभागी हुने गर्दैनथे ।
सन् २०११ मा बीजेपीका अहिलेका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह सद्भावना यात्राका क्रममा गोरखपुर पुग्दासमेत उनलाई कार्यक्रममा बोलाइएको थिएन । सन् २०१३ को विधानसभा निर्वाचनमा योगीले सिफारिस गरेका धेरैलाई बीजेपीले टिकट दिएन, त्यसैले उनका समर्थकहरूले बीजेपीविरुद्ध उम्मेदवारी समेत दिएका थिए । सन् २०१२ मा उत्तर प्रदेशमा भाजपाले त्यति राम्रो सिट नजितेपछि उनी र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुध्रिने क्रम सुरु भयो । उनी मुख्यमन्त्री भएपछि भारतका नयाँ बहस सुरु भएको छ– जातीय रूपमा यति विभाजित अभिव्यक्ति दिने योगीले यूपीका सबै जात र वर्गलाई कसरी मिलाएर अगाडि लैजालान् ? यसले भारतको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
मृत्यु पछि पनि जीवन निरन्तर छ त?
नवीन दाहाल फाल्गुन १०, २०७४
के मृत्यु पछि पनि जीवन निरन्तर छ त? भनिन्छ, आत्मा अमर छ, शरिर मरेर गएपनि आत्मा उडेर गई अन्य कुनै शरिरमा समाबिष्ट हुन्छ । के...
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी फाल्गुन १०, २०७४
भ्रष्टाचार देशको प्रमुख राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखापर्दै आएको छ । यो रोग एक किसिमले नेपालको अर्थराजनीतिमा सुनामीजस्तो बढेर जानथालेको अनुभूति जनतालाई हुनथालेको छ । देशमा आर्थिक विकास...
संघीय संरचना कार्यान्वयनको संक्रमण
चन्द्रकिशोर फाल्गुन १०, २०७४
ढुङ्गा फोरेर पीपल उम्रिएझैं नेपालमा संघीयता जन्मिएको हो । कागजमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा सातवटै प्रदेशमा निर्वाचित सरकार बनिसकेको छ । तैपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चितता तथा...
मैथिलीमाथि अन्याय किन ?
रामचन्द्र झा फाल्गुन १०, २०७४
भौगोलिक विशेषताले संस्कृति विशेषको सीमा निर्धारण गर्छ । ती सीमाभित्र बस्नेहरूको जीवन–दर्शन, जीवन–मूल्य दृष्टि–निक्षेप, रीतिरिवाज, ज्ञान, विश्वास, परम्परा, कला, नैतिक मानक भेषभूषा इत्यादि समुच्य व्यवहार संस्कृतिको...
स्वास्थ्य व्यवसायमा बेथिति
सम्पादकीय फाल्गुन १०, २०७४
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्ने हरेक अनुगमनमा फार्मेसी, क्लिनिक र अस्पतालहरूमा चरम लापरबाही फेला पर्ने गरेको छ ।
विज्ञान/गणित शिक्षकविहीन विद्यालय
टीकादेवी पौडेल फाल्गुन १०, २०७४
सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान विषयगत शिक्षकको अभाव धेरैतिर देखिएको छ ।